EOS စျေး - အွန်လိုင်း EOS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို EOS (EOS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ EOS (EOS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ EOS ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 477 901 402.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ EOS တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
EOS များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EOSEOS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$3.1EOSEOS သို့ ယူရိုEUR€2.61EOSEOS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£2.36EOSEOS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.82EOSEOS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr27.84EOSEOS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.19.46EOSEOS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč68.77EOSEOS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł11.54EOSEOS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$4.13EOSEOS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$4.29EOSEOS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$69.5EOSEOS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$24.04EOSEOS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$16.54EOSEOS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹232.33EOSEOS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.523.13EOSEOS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$4.25EOSEOS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$4.64EOSEOS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿96.4EOSEOS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥21.57EOSEOS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥327.49EOSEOS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3673.01EOSEOS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1175.56EOSEOS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽227.1EOSEOS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴85.95
EOSEOS သို့ BitcoinBTC0.000263 EOSEOS သို့ EthereumETH0.00784 EOSEOS သို့ LitecoinLTC0.0522 EOSEOS သို့ DigitalCashDASH0.0309 EOSEOS သို့ MoneroXMR0.0329 EOSEOS သို့ NxtNXT218.8 EOSEOS သို့ Ethereum ClassicETC0.434 EOSEOS သို့ DogecoinDOGE866.41 EOSEOS သို့ ZCashZEC0.0326 EOSEOS သို့ BitsharesBTS118.8 EOSEOS သို့ DigiByteDGB111.79 EOSEOS သို့ RippleXRP10.17 EOSEOS သို့ BitcoinDarkBTCD0.104 EOSEOS သို့ PeerCoinPPC10.81 EOSEOS သို့ CraigsCoinCRAIG1381.76 EOSEOS သို့ BitstakeXBS129.34 EOSEOS သို့ PayCoinXPY52.92 EOSEOS သို့ ProsperCoinPRC380.49 EOSEOS သို့ YbCoinYBC0.00163 EOSEOS သို့ DarkKushDANK972.36 EOSEOS သို့ GiveCoinGIVE6563.37 EOSEOS သို့ KoboCoinKOBO680.74 EOSEOS သို့ DarkTokenDT2.86 EOSEOS သို့ CETUS CoinCETI8751.24